Amagilavu ​​eglobe agijinywa ngesondo lesandla futhi alawula nokujikeleza kwamanzi. Kodwa-ke, futhi zakha ukulahleka kwengcindezi okukhulu. Ukukhetha i-valve efanele kuyadingeka, njengoba izinhlobo ezahlukahlukene zinemisebenzi ehlukene kanye nokusetshenziswa. Okumbalwa ...
Iyini i-Valve Check?
Ama-valve wokuhlola ngokuvamile afakwa kupayipi ukuvimbela ukugeleza emuva. I-valve yesheke ngokuyisisekelo i-valve yendlela eyodwa, ukugeleza kungahamba ngokukhululeka ohlangothini olulodwa, kepha uma ukugeleza kujikeleza, i-valve izovalwa ukuvikela ipayipi, ...
Ivelufa levemvane luhlobo lwedivayisi elawula ukugeleza, okubandakanya idiski ejikelezayo yokusebenzisa uketshezi olugeleza kule nqubo. Endaweni emi mpo yeveluvane yovemvane, kune-disc esuselwa ensimbi esebenza ukuvala ...